November 15, 2011 – democracy for burma
Monks Protest Statement in MDY (November 15, 2011)
On November 15, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Photos VJ Burma Media Network
လူငယ်များရဲ့ စကားလက်ဆောင် KIC
ကျနော့်ဇာတိက ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ခိုဝယ်ရွာမှာ မွေးပါတယ်။ မောင်နှမ ၅ယောက်မှာ ကျနော်က လေး ယောက်မြောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်လည်း ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိ၊ နယ်မြေလည်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတော့ မိသားစုရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေလည်း မကောင်းပြန်တော့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိသားစု စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေတဲ့အပေါ်မှာ ၁၀တန်းအောင်တဲ့အထိပဲ ကျောင်းပညာကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။
ကျနော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အဆိုတော်နဲ့ ခရစ်ယာန်အသင်းအုပ်ဆရာ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမှန်းသူမှန်း သိတတ်လာ တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေ ပေါ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ကျနော် စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှာ ကင်းလွတ်အောင် ကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက် ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားရင်းနဲ့ ကရင့်တော်လှန်ရေးထဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ကရင့်တော်လှန်ရေးထဲ ကျနော် ၀င်လိုက်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးထဲမှာ တနှစ်အကြာ ခရိုင်ဥက္ကဌက ကျနော့်ကို ကရင်မျိုးဆက်သစ် သင်တန်းကျောင်းကို ပို့မယ်ဆိုပြီး ကျောင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ လိုက်နာရမဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကိုပါ ကျနော့်ကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော် ကရင်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းကို နယ်စပ်တစ်နေရာမှာ တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကရင်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းက တနှစ်နဲ့ ရှစ်လ တက်ရပါတယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာ ဗဟုသု တ၊ အတွေ့အကြုံရဖို့အတွက် ကေအဲန်ယူ ထိန်းချုပ်တဲ့ ခရိုင် ၇ခုမှာ Intern (အလုပ်သင်) ၃လ ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကရင်မျိုး ဆက်သစ်ကျောင်းက လူငယ်တွေအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ကရင့်သမိုင်းအကြောင်းအရာ စသည့်ဘာသာပေါင်းများစွာ သင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကျောင်းမှာတက်ရင်း အတွေ့အကြုံတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ ကိုယ့်ကရင်သမိုင်းကြောင်းရာတွေ အများကြီး သိလာတယ်။ ကျနော် ကျောင်းပြီးရင် ကျရာတာဝန်ကို ကျေပြွန် အောင် ထမ်းဆောင်သွားမယ်။
လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံးကို ကျနော်ပြောချင်တာ အခု တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် လူငယ်တွေ လိုအပ်တယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်တွေ ပုခုံးလွဲပြောင်း တာဝန်ပေးဖို့အတွက် လူငယ်တွေ လိုအပ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူငယ်တွေ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသကိုပဲရောက်ရောက် စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ကိုယ် စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါလို့ ကျနော် အဲလိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
KIC New Home Page
Announcement Shan Drug Watch 2011 Report-Chiang Mai 16.November
On November 15, 2011 November 15, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Suu Kyi meets the press on her one-year freedom-video_BDC
Burmese monks protest in support of political prisoners
Chiang Mai (Mizzima) – Five Burmese Buddhist monks have launchedaprotest in support of political prisoners by locking themselves inareligious hall in Maha Myatmuni Pagoda compound in Maha Aungmyay in Mandalay in central Burma.
Burmese monks in Mandalay lift supplies from outside after they locked themselves insideareligious building to protest for the release of all political prisoners on Tuesday, November 15, 2011. Five monks confined themselves inside the building and also called forastop to internal fighting and for freedom of speech. It’s the first time monks took to protests in Mandalay sinceanew government was elected. Photo: AFP
Banners saying “Release Political Prisoners Immediately,” “Stop the Civil War” and “Give Us Freedom” are hanging on the outside wall of the hall, said an eyewitness.
The protest started Tuesday morning around 5:30 a.m. Monks usedahand-held loud speaker to announce the protest.
Eyewitness said that there might be five monks inside the compound. Authorities are on the scene and negotiations are underway, they said.
An eyewitness said monks claimed they would not leave the building unless their demands are met. The city’s influential senior monks from Masoeyein Monastery and the Sangha organization are negotiating with the protestors.
“They secured the veranda space by locking the door. It is five feet wide and about 30 feet long. The hall is located at the northeast corner of the (Maha Myatmuni) pagoda,” an eyewitness told Mizzima by phone.
“So far, security is normal. There are about 500 spectators,” he said.
Monks who are politically active have beenasource of concern for the Burmese government. About 200 people including activist Burmese monks gathered in Chiang Mai in September foracandle-lit peace walk and rally to mark the 4th anniversary of Burma’s “Saffron Revolution.” The peace walk and Buddhist prayer service was led by three Buddhist monks including Ashin Issariya, who wasakey organizer in the 2007 uprising.
The event was held in remembrance of the hundreds of thousands of demonstrators, led by thousands of Buddhist monks who marched down streets in cities and towns across the country in an attempt to depose the military junta.
Ashin Issariya (also known as King Zero), who led the peace walk and gaveaspeech at the rally, toldMizzima, “Yes, I would like to see another peaceful uprising of the people in Burma. We must not forget the ‘Saffron Revolution.’ Until political prisoners who are in jail are released and the human rights abuses committed by the regime are stopped, the people will not be satisfied.”
The civil unrest in 2007 was sparked by the junta’s decision to remove fuel subsidies without warning, causing fuel prices to soar overnight. The protests peaked on September 24 when up to 100,000 people marched in Rangoon, the largest anti-government protests since the pro-democracy protests in August 1988. Continue reading “Burmese monks protest in support of political prisoners” →
AASYC Open Letter to All 90-Election Winners -Statements Orgs Support DASSK and NLD
On November 15, 2011 November 16, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
We do strongly support for Daw Aung San Suu Kyi and NLD decision on coming 18.November.2011Daw Aung San Suu Kyi once said that “Flexibility is notaweakness and rigidity is notastrength”. I will lend my unconditional support to Daw Aung San Suu Kyi and NLD. We will abide by whatever decision made on 18th November
Burmese Muslim Association +Support+DASSK+NLD
The Statement of IFBNC on NLD’s Current Position-bur
DAB on CURRENT SITUATION
နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ခွဲထွက်ကာ ဒီကေဘီအေအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည့် ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကြီးငူဒေသမှ ဗိုလ်မှူးစောဘိ ဦးစီးသည့်တပ်ဖွဲ့သည် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) အဖြစ်သာ ဆက်လက် ရပ်တည်သွားမည်ဟု ယမန်နေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ကေအဲန်ယူ၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနေရာတွင် KNU ဖားအံခရိုင်၊ သထုံခရိုင် ဥက္ကဌများ၊ တပ်မဟာ(၁)နှင့် တပ်မဟာ(၇)မှူးများ နှင့် ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်မှူးစောဘိတို့ မနက် ၉နာရီမှစ၍ နှစ်နာရီကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြရာမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၇) ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူးအယ်ဆဲဆဲက ယခုလို ပြောသည်။
“ဗိုလ်ဘိအနေနဲ့ BGF သို့မဟုတ် DKBA သို့မဟုတ် KNU အဲဒီအနေအထားထဲမှာ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲဆိုတာ အားမနာတမ်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ဗိုလ်ဘိကတော့ အစိုးရနဲ့လည်း ပြန်မပေါင်းချင်ဘူး။ ဒီကေဘီအေအနေနဲ့ ရပ်တည်ဖို့က လည်း ဆရာတော်(ဦးသုဇန)ကို အားကိုးလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ရှေ့ဆက်ပြီး ကေအဲန်ယူရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အောက်မှာပဲ ရပ်တည် လုပ်ဆောင်သွားတော့မယ်လို့ ပြောတယ်။”ဟု ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၁၄ရက်နေ့က ဒီကေဘီအေသည် ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် တပ်မှူးညီလာခံတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူး ချုပ်စောလားပွယ် ဦးစီးသော ဒီကေဘီအေ ကလို့ထူးဘော ဌာနချုပ်အောက်တွင် ဗိုလ်မှူးကျော်သက်နှင့် ဗိုလ်မှူးစောဘိတို့ကို ကလို့ထူးဝါးနှင့် ကလို့ထူးလား ဗျူဟာမှူးများအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု ဒီကေဘီအေက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ Continue reading “ဗိုလ်မှူးစောဘိ၏ DKBA တပ်ဖွဲ့ ကေအဲန်ယူအဖြစ်သာ ရပ်တည်သွားမည်” →